Coincheck ọkwa refunds amalite izu - Blockchain News
Japanese cryptocurrency mgbanwe Coincheck mara ọkwa na ọ na-ezube-ekwe ka ndị ọrụ na-ịdọrọ ego obodo si ha akaụntụ ọzọ Tuesday.
Nke a na-abịa mgbe a hack na Jan. 26, nke mere ka ihe mberede ọrụ shutdown. Coincheck kpọrọ a pịa ogbako nke ọ conceded na 500 NO nde tokens (uru gburugburu $533 nde n'oge) na a kpọgara ya digital wallets site onye ọjọọ.
Na a mara posted taa, ụlọ ọrụ kwuru (via unofficial translation):
“Ugbu, akụ nke ndị ahịa’ Japanese yen-jisiri n'enweghị na a ego alụmdi. Anyị ga-maliteghachi withdrawals mbido February 13, 2018.”
Ahịa nwere ego rapaara na mgbanwe ebe ọ bụ na nkwenye ya tara ahụhụ ihe yiri nnukwu hack na akụkọ ihe mere eme nke cryptocurrency.
Japan ego Watchdog, na Financial Services Agency (FSA), kwuru n'oge na, “Na-ekwesịghị ekwesị management nke usoro ihe ize ndụ ghọrọ ndị norm na Coincheck.”
BitGo inweta ut u ...
NASDAQ Chief: Kaadị ...
Previous Post:Gịnị mere ndị Binance Exchange na mgbe ọnụ ekwegasịrị amalite
Next Post:Mere Coinbase ebubo na nke overloading na Bitcoin netwọk na otú SegWit ọrụ ?
June 11, 2018 na 10:39 AM
August 29, 2018 na 8:36 AM